Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị mere n’abalị iri na anọ n’ọnwa Naịsan | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Isoko Japanese Jula Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
MATIU 26:21-29 MAK 14:18-25 LUK 22:19-23 JỌN 13:18-30
JIZỌS EMEE KA AMATA NA JUDAS BỤ SABO
JIZỌS AMALITE NCHETA ỌNWỤ YA
Jizọs sara ndịozi ya ụkwụ ná mgbede ụbọchị ahụ, si otú ahụ kụziere ha ịdị umeala n’obi. Mgbe ha richara nri Ememme Ngabiga, Jizọs kwuru ihe dị n’amụma Devid buru. Ọ sịrị: “Onye mụ na ya dịkwa ná mma, onye m tụkwasịrị obi, onye na-eri nri m, atụgharịwo megide m.” O kwuziri, sị: “Otu onye n’ime unu ga-arara m nye.”—Abụ Ọma 41:9; Jọn 13:18, 21.
Ndịozi Jizọs lerịtara onwe ha anya, onye ọ bụla n’ime ha ajụọ Jizọs, sị: “Onyenwe anyị, ọ bụghị m, ka ọ̀ bụ m?” Judas Iskarịọt sodị jụọ. Pita gwara Jọn, bụ́ onye nọkwutere Jizọs, ka ọ jụọ ya onye ọ na-ekwu maka ya. N’ihi ya, Jọn dabeere n’obi Jizọs ma jụọ ya, sị: “Onyenwe anyị, ònye ka ọ bụ?”—Matiu 26:22; Jọn 13:25.
Jizọs zara ya, sị: “Ọ bụ onye ahụ m ga-enye achịcha a m na-esuru.” Jizọs weziiri achịcha, suru ya n’efere dị na tebụl ma nye ya Judas. Jizọs kwuru, sị: “Nwa nke mmadụ na-aga ịnwụ, dị nnọọ ka e dere banyere ya, ma ahụhụ ga-adịrị onye a ga-esi n’aka ya rara Nwa nke mmadụ nye! Ọ gaara akara onye ahụ mma ma a sị na a mụghị ya.” (Jọn 13:26; Matiu 26:24) Setan banyeziri n’ime Judas. Ebe Judas Iskarịọt dị mbụ na-arụrụ aka, ọ hapụziri onwe ya ka Ekwensu jiri ya kwara ngwá ọrụ. O si otú ahụ bụrụ “nwa mbibi ahụ.”—Jọn 6:64, 70; 12:4; 17:12.
Jizọs gwara Judas, sị: “Ihe ị na-eme, mee ya ọsọ ọsọ.” Ndịozi Jizọs ndị ọzọ chere na ebe ọ bụ Judas na-eji igbe ego, na Jizọs na-agwa ya, sị: “‘Zụta ihe ndị dị anyị mkpa maka ememme a,’ ma ọ bụ na o kwesịrị inye ndị ogbenye ihe.” (Jọn 13:27-30) Ma, Judas pụrụ ka ọ gaa rara Jizọs nye.
N’otu mgbede ahụ ha riri nri Ememme Ngabiga, Jizọs malitere nri ọhụrụ. O weere otu ogbe achịcha, kpee ekpere, nyawaa ya ma nye ya ndịozi ya ka ha rie. Ọ gwara ha, sị: “Nke a pụtara ahụ́ m nke a gaje inye n’ihi unu. Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m.” (Luk 22:19) Ndịozi Jizọs bugharịrị achịcha ahụ n’etiti onwe ha ma rie ya.
Mgbe ha richara achịcha ahụ, Jizọs buuru iko mmanya, kpee ekpere n’elu ya ma bunye ya ndịozi ya. Ha niile ṅụrụ ya. Jizọs kwuru gbasara iko mmanya ahụ, sị: “Iko a pụtara ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ nke dabeere n’ọbara m, bụ́ nke a gaje ịwụpụ n’ihi unu.”—Luk 22:20.
Ihe a bụ otú Jizọs si malite ime Ncheta Ọnwụ ya, bụ́ ihe ndị na-eso ụzọ ya ga na-eme kwa afọ n’abalị iri na anọ n’ọnwa Naịsan. Ọ ga na-echetara ha ihe Jizọs na Nna ya mere iji napụta ndị na-efe Chineke ná mmehie na ọnwụ. Ncheta Ọnwụ Jizọs bara uru karịa Ememme Ngabiga ndị Juu n’ihi na o mere ka a mara otú Jehova ga-esi gbapụta ụmụ mmadụ ndị kweere na ya.
Jizọs sịrị na a ga-awụpụ ọbara ya “n’ihi ọtụtụ mmadụ maka mgbaghara mmehie.” Ndị ga-eso ná ndị a ga-agbaghara mmehie ha bụ ndịozi ya kwesịrị ntụkwasị obi na ndị ọzọ ga-ekwesịkwa ntụkwasị obi. Ha ga-eso ya chịa n’Alaeze Nna ya.—Matiu 26:28, 29.
Olee amụma dị na Baịbụl Jizọs kwuru okwu ya, bụ́ nke gbasara onye ya na ya dị ná mma? Ònye ka Jizọs kwuru na amụma ahụ mezuru n’isi ya?
Gịnị ka Jizọs gwara Judas mee? Olee otú ndịozi ndị ọzọ si ghọta ihe a Jizọs gwara ya?
Olee ihe ọhụrụ Jizọs malitere? Oleekwa uru ọ bara?
Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị—Ihe Omume nke Na-ewetara Chineke Nsọpụrụ